မြေအိုးထမင်းပေါင်း | Colourful Recipes
ချက်ပီးသား ၀က်နံရိုး – Pork Rib
၀က်အူချောင်း – Chinese Sausage
ကြက်သွန်ဖြူ – Garlic
ဂျင်း – Ginger
ခရုဆီ – Oyster Sauce
ပဲငံပြာရည် ( အကြည် ) – Dark Soy Sauce
ပဲငံပြာရည် ( အပြစ် ) – Sweet Soy Sauce
ကော်မှုန့် – Corn Starch
ဆား – Salt
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – Pepper
သကြား – Brown Sugar
ကြက်သွန်မြိတ် – Spring Onion
ဆေးဘဲဥ – Preserved Duck Egg
ပုစွန်ခြောက် – Dried Shrimp
ဆန် –2cups rice
ကြက်ပေါင်းရည် –3cups Chicken Stock
ဆီ တဇွန်းကို အပူပေးပါ။
ဆီပူပီ ဆိုတာနှင့် ကြိတ်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း ထည့် ဆီသတ်ပါ။
ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည် ( အကြည် + အပြစ် ) ထည့်၊ ဆား၊ သကြား၊ ကော်မှုန့် အနည်းငယ် ထည့်မွှေပါ။
ပုစွန်ခြောက်၊ ၀က်အူချောင်း ထည့်ပါ။
( Medium Heat ) – 15 Minutes မီးမြေးမြေးဖြင့် ချက်ပါ။
၁၅ မိနစ် လောက် ချက်ရင် ထမင်း ကျက်ပါလိမ့်မည်။
ထမင်း ကျက်ခါနီးရင် … ၀က်နံရိုး ကို ထမင်း အပေါ်မှာ တင်ထားပီး မြေအိုး အဖုံးကို ပြန်ဖုံးထားပါ။
( Low Heat ) – 15 Minutes ဖြင့် နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ် ချက် အပီး …
၀က်နံရိုး မြေအိုး ထမင်းပေါင်း
ပဲငံပြာရည်ထဲမှာ ငရုတ်သီးစိမ်း နှင့် ကြက်သွန်ဖြူ စိမ်ပီး တို့စရာ လုပ်ထားပါ။
ဆေးဘဲဥ၊ ၀က်နံရိုးဖြင့် တို့စားပါက စားလို့ကောင်းပါသည်။
By Thet Nandar • Posted in Pork Recipe, Rice - Pot Rice, Rice Recipe, Thiriyatanar's Special	• Tagged မြေအိုးထမင်းပေါင်း, colourful recipes blog, corn starch, dark soy sauce, dinner, food, oyster sauce, sweet soy sauce
3 comments on “မြေအိုးထမင်းပေါင်း”
August 23, 2012 @ 10:59 pm
That looks wonderful… I’ve only eaten preserved eggs cold before. I must try this 🙂
Yummy! Hot pot rice – pork ribs with black bean sauce with preserved duck egg on top. My favourite is the clay pot rice with black beans pork ribs. I’d say that, the pot rice was really yummy.
Sweet Jane (@Sweety_NYC)
September 8, 2012 @ 11:21 am
Please stop teasting me! You’re making my tummy talking. 😛